Flooring, Ceiling & Roofing
Decoration & Construction Services
Steels, Aluminium & Metal
Bath room and Kitchen
Windows, Doors & Gate
Safety Shoes and Equipments
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Base Jack&nbsp; နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Screw rod(mm) 32x600</p><p>Base Plate(mm) 120x120x4</p>
Galvanized Frame Scaffolding
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Height 1700mm,914mm,1700mm</p><p>Width 1219mm,1219mm,762mm</p><p>Length 1829mm,1829mm,1829mm</p>
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး အိုင်တိုင်များ-Galvanized I-Head Prop နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p><br></p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Inner Tube 48x1.8mm,48x1.8mm,48x2.0mm</p><p>Top &amp; Base Plate 120x120x5.0mm,120x120x5.0mm,120x120x5.0mm</p>
Galvanized T-Head Prop
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Galvanized T-Head Prop (GI တီတိုင်များ) နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Adjustable Height 6.5-11ft, 8.5-13ft, 9.5-15.5ft</p><p>Outer Tube 60x1.8mm, 60x1.8mm, 60x2.0mm</p>
Galvanized Walking Board With Hooks
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းအနင်းပြားများ- Galvanized Walking Board With Hooks နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Material-Q195~Q235</p><p>Width-500mm</p><p>Height-50mm</p><p>Length-1829mm</p>
Galvanized Walking Board
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းအနင်းပြားများ- Galvanized Walking Board နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။<br></p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Width-225mm</p><p>Height-38mm</p><p>Length -2000/4000mm</p>
Galvanized Scaffold Monkey Ladder
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းလှေကားများ- Galvanized Scaffold Monkey Ladder&nbsp; နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Material Q235</p><p>Width 480mm</p><p>Length 2400mm</p>
Galvanized Scaffolding Ladder
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းလှေကားများ- Galvanized Scaffolding Ladder နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Material Q235</p><p>Width 480mm</p><p>Length 2400mm</p>
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Joint Pin&nbsp; နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p>
Mild Steel Prop Sleeve
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Mild Steel Prop Sleeve နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p>
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Ratchet Spanner နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p><div><br></div>
Scaffold Wheel With Brake
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Scaffold Wheel With Brake နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p>
Joint Pin Coupler (Bone Joint)
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းပိုက်များ Joint Pin Coupler (Bone Joint) နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p>
Scaffolding Fixed Coupler
<p>ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ Decoration &amp; Construction Services လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p>- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ငြမ်းပိုက်များ Scaffolding Fixed Coupler နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဝယ်ယူ ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....</p><p>ကျွန်​​တော်​တို့ Empire မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Scaffolding Sales &amp; Rental Services, Formwork Accessories &amp; Steel Structure နှင့် ငြမ်းဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ချီပေးနေပါသည်။</p>
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>
copyright © 2022 www.baganmart.com. All right reserved.